Hosoloan'ny Robots ve ny Mpivarotra? | Martech Zone
Hosoloan'ny Robots ve ny Mpivarotra?
Zoma, Jolay 14, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Senraj Soundar
Taorian'ny naha Tompondakan'i Jeopardy an'i Watson, IBM niara-niasa tamin'ny Cleveland Clinic mba hanampiana ireo mpitsabo hanafaingana sy hanatsara ny taha marina amin'ny valim-panafarany sy ny diabeta nomeny. Amin'ity tranga ity dia mampitombo ny fahaizan'ny dokotera i Watson. Raha izany, raha afaka manampy amin'ny fitsaboana ny solosaina, dia azo antoka fa toa afaka nanampy sy nanatsara ny fahaizan'ny mpivarotra koa ny solosaina.
Saingy, hanolo ny mpiasa am-barotra ve ny solosaina? Mpampianatra, mpamily, mpitsangatsangana ary mpandika teny dia samy nanana avokoa milina marani-tsaina miditra an-tsehatra amin'ny laharany. Raha 53% ny hetsiky ny mpivarotra dia mandeha ho azy, ary amin'ny taona 2020 ny mpanjifa dia hitantana ny 85% ny fifandraisan'izy ireo nefa tsy mifanerasera amin'ny olombelona, ​​midika ve izany fa handray ny toeran'ny varotra ny robot?
Amin'ny lafiny ambony amin'ny ambaratongan'ny vinavina, Matthew King, Lehiben'ny Business Development Development Officer ao amin'ny Pura Cali Ltd, hoy i fa ny 95% ny mpivarotra dia hosoloina faharanitan-tsaina artifisialy ao anatin'ny 20 taona. Ny Washington Post dia manana tombana ambany kokoa amin'ny a lahatsoratra vao haingana izay notanisain'izy ireo ny tatitry ny University of Oxford 2013 izay milaza fa saika ny antsasaky ny miasa any Etazonia no atahorana hosoloina automatique ao anatin'ny folo na roa taona ho avy - manamarika ny toeran'ny fitantanan-draharaha ho iray amin'ireo marefo indrindra. Ary na ny sekreteran'ny Tahirimbolam-panjakana teo aloha, Larry Summers, dia nilaza vao haingana fa hatramin'ny taona vitsy lasa izay, nieritreritra izy fa teo amin'ny lafiny ratsy tamin'ny tantara ny Luddites ary teo ankavanana ireo mpanohana ny teknolojia. Fa, nanohy nilaza hoe: Tsy dia azoko antoka tanteraka izao. Andraso ary! Tokony hatahotra ve ny mpivarotra?
Antenaina fa raharaha hiaraha-miasa fa tsy hanohitra. Salesforce Einstein dia programa momba ny artifisialy artifisialy (AI) izay mifandray amin'ny fifandraisana rehetra amin'ny mpanjifa ary koa amin'ny fitahirizana firaketana ny mpanjifa mba hahafantaran'ny mpivarotra ny fotoana tokony hitenenana ny zavatra mety amin'ny fotoana mety. Salesforce dia nividy orinasa AI dimy ao anatin'izany, TempoAI, MinHash, PredictionIO, MetaMind, ary Implisit Insights.
MinHash - sehatra AI sy mpanampy marani-tsaina hanampiana ny mpivarotra hamorona fampielezan-kevitra.
fotoana - fitaovana kalandrie marani-tsaina tarihan'ny AI.
FaminanianaIO - izay niasa tamina tahirim-pahalalana momba ny milina loharano misokatra.
Ampidiro ny fahitana - scan ny mailaka hahazoana antoka fa marina ny angona CRM ary manampy amin'ny faminavina rehefa vonona ny hanidy fifanarahana ny mpividy.
MetaMind - dia mamorona programa mianatra lalina izay afaka mamaly ireo fanontaniana mifandraika amin'ny fifantenana lahatsoratra sy sary amin'ny fomba manakaiky ny valintenin'olombelona.
Tsy ny Salesforce irery no ao amin'ny lalao AI. Vao haingana dia nahazo Microsoft SwiftKey, mpanamboatra kitendry mahery vaika AI izay maminavina izay hotendreny, ary koa Wand Labs, mpamorona teknolojia chatbot Powered sy teknolojia serivisy ho an'ny mpanjifa, ary Genee, mpanampy amin'ny fandaharana marani-tsaina AI.
Araka ny nolazain'i Matthew King:
Ireo dia fitaovana rehetra afaka mamakafaka ny fahatsapan'ny mpanjifa amin'ny resadresaka mailaka na an-tariby, mba hahafantaran'ny mpivarotra sy ny masoivohon'ny mpanjifa ny fihetseham-pon'ny mpanjifany sy ny fihetsik'izy ireo manoloana ny fanontaniana na bitsika sasany. Io dia ahafahan'ny mpivarotra mahazo fahitana amin'ny fomba fanaovana fampielezan-kevitra tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fikendrena ny olona amin'ny fotoana mety miaraka amin'ny hafatra marina mifototra amin'ny safidin'ny mpampiasa sy ny fahazarana tsy manam-paharoa.
Saingy, hisolo ny olona mpivarotra ve izany teknolojia rehetra izany? The Washington Post mampatsiahy antsika izany asa izany dia nahazo tombony teo amin'ny famokarana nandritra ny taonjato faha-19 sy faha-20 niaraka tamin'ny fandrosoan'ny teknolojia. Ka noho izany, mety ho raharahan'ny mpivarotra miasa eo akaikin'ny robot izany mba hanaovana tsara kokoa ilay asa.
Tadidio azafady mividy amin'ny olona ny olona raha tsy ny mpividy dia robot izay tsy mampaninona ny mividy amin'ny robot. Saingy, azo antoka fa eo ireo robot ary tsara kokoa ny miara-miasa amin'izy ireo fa tsy manao fahadisoana mitovy amin'i John Henry: Aza manandrana mandresy lahatra ilay masinina, ataovy izay hanampian'ny milina ilay mpivarotra hanao. Avelao ny masinina hitrandraka ny angona sy ny mpivarotra hanidy ny fifanarahana.
Tags: aifahaizana artifisialychatbotfototarazomametraka hevitrafahavaratra LarryMatio MpanjakametamindMicrosoftminhashpredictionioPura CaliFanamafisana ny varotrasalesforceSalesforce Einsteinfandaharam-potoanasekreteran'ny tahirimbolam-panjakanaswiftkeyfotoanaUniversity of OxfordwandlabsWashington Post
Senraj no mitarika ny ekipa mpitantana ao amin'ny ConnectLeader manatratra ny tanjona voalohany amin'ny "fahaiza-manao injeniera sy serivisy ho an'ny mpanjifa lehibe". Talohan'ny ConnectLeader dia nanangana orinasa serivisy fandraharahana rindrambaiko mahomby roa izy izay niasa tamina mpiasa zato mahery nanerana an'i Etazonia ary namolavola vokatra rindrambaiko mandroso ho an'ny mpanjifa. Senraj dia nahazo mari-pahaizana MS momba ny siansa momba ny informatika (miaraka amin'ny haja ambony indrindra) avy amin'ny Oniversiten'i Massachusetts ary mari-pahaizana BS amin'ny Teknika Elektrika avy ao amin'ny Anna University, Chennai, India. Tamin'ny 1992, Senraj dia nahazo ny loka 'National Technology Award' malaza avy amin'ny filoham-pirenena India ho an'ny famoronana tsara indrindra ao amin'ny firenena.